Firenena tsy misy visa ho an'ireo manana pasipaoro yemenita - ALinks
Firenena tsy misy Visa ho an'ireo manana pasipaoro Yemenita
Jolay 9, 2021 Maitri Jha Travel, visa ho, Yemen
Nahazo alàlana handeha any amin'ny firenena enina tsy misy visa ny Yemenita. Ireo manana pasipaoro yemenita koa dia afaka mangataka visa 22 sy visa 14 rehefa tonga. I Yemen dia manana mponina 27.5 tapitrisa, ary Sana'a no renivohiny.
Inona ny tanjaky ny pasipaoro Yemenita?
Raha jerena ny Index Passport Ranking Index, ny pasipaoro Yemenita dia faha-103 izao. Ny manana pasipaoro yemenita dia voafetra ihany ny fahafaha-mivezivezy raha oharina amin'ireo tompona pasipaoro avy amin'ny firenena hafa.
Visa tsy ilaina ho an'ireo manana pasipaoro yemenita:
Pasipaoro Yemenita manome alalana ny mpitondra hitety firenena sy faritany folo. Ireo manana pasipaoro yemenita dia afaka mandeha any amin'ireto firenena manaraka ireto nefa tsy mila visa:
Visa amin'ny fahatongavan'ireo manana pasipaoro yemenita
Ireo manana pasipaoro yemenita dia afaka mahazo visa rehefa tonga any amin'ireto firenena sy faritany manaraka ireto:
Sri Lanka * (eTA)
* (eTA): Fahazoan-dàlana mandeha amin'ny elektronika
eVisa ho an'ireo Yemenita Passport Holders
Ireo manana pasipaoro yemenita dia takiana mba hahazoana eVisa alohan'ny hahatongavany any amin'ireo firenena sy faritany manaraka.
Md Kitts sy Nevis
Topimaso momba an'i Yemen
I Yemen dia firenena iray ao amin'ny Saikinosin'i Arabia izay mizara sisin-tany amin'i Arabia Saodita sy Oman, ary koa ny sisintany an-dranomasina amin'i Somalia, Djibouti, ary Eritrea. Ny fiteny ofisialy dia ny Arabo.
Sana'a, renivohitra sy tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena, dia eo amin'ny 2,200 kilometatra ny haavony ary misy mponina 28 tapitrisa. Mitovy habe amin'i Frantsa ny firenena, miaraka amin'ny tontolo iainana mafana ary kely ny rotsakorana.
firenena afaka visa ho an'ireo manana pasipaoro yemenita
Visa any Vietnam ho an'ny karana
Visa any Italia ho an'ny karana
Ankafizo ny fety sy Seasons of Canada
Visa any Arzantina ho an'ny karana
Fitaterana any UAE !!
Ahoana ny fomba fangatahana visa aostralianina?